Bekee ụlọ akwụkwọ | Njem zuru oke
Ezigbo England | | England
E nwere nnukwu ọdịiche dị n’etiti echiche ndị Spaniard nwere gbasara «pub»Na echiche onye bekee nwere. Maka ndị Spanish, ụlọ mmanya bụ ebe ị ga-a forụ ihe ọ drinkụ drinkụ, gee egwu, ịgba egwu na ikekwe igwu mmiri. Maka ndị bekee ọ dịghị otu a. Ya pubs bụ ebe na-aga maka a biya na iri nri ehihie ma ọ bụ nri abalị. Nke a bụ otu n'ime ndị iche. Na England ị nwere ike iri ihe na ụlọ mmanya, mana ọ dị ka ebe ị na-a barụ mmanya ebe ọ bụ na anaghị efe gị ozugbo na tebụl. Nwere ike ịnwale ịnọdụ ala na tebụl, mana ị ga-ahụ na ọ nweghị onye ga-aga. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ gị ga-emerịrị gaa na mmanya hazie ihe ị chọrọ ị drinkụ.
Ihe ọzọ nke na-adọrọ uche anyị bụ ha ndokwa. Na Spain pubs na-emechi 2 ma ọ bụ 3 nke ụtụtụ, ma na England pubs abụghị ebe ịnọ ọdụ n'oge. Kasị nso na 11 elekere, dị ka ha na-eme mgbe niile, ọ bụ ezie na iwu na-adịbeghị anya na-enye ha ohere imechi ihe ma emechaa.
N'ikpeazụ, metụtara oge mmechi, anyị na-ahụ oge nke mmanya ikpeazụ. Nkeji iri tupu elekere iri na otu nke abalị a mgbịrịgba nke ahụ na-adọ ha aka na ntị na ọ bụ oge ịtụ ihe ọ drinkụ drinkụ ikpeazụ, ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe ọzọ ga-eme ma emesịa.
Ihe ndị a niile bụ ihe ị ga-eburu n’uche tupu ị gaa ụlọ mmanya na bekee, ebe ọ bụ na omenaala ha abụghị nke anyị.
omenalaGeneralOge ntụrụndụLọ oriri na ọụụ na Ogwe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ogwe Bekee
Guillermo Balandin dijo
Zaghachi Guillermo Balandin
Ọdọ mmiri Guadalcacín meghere ibo ụzọ ya ọzọ
Vehiclesgbọala ọhụrụ maka ụlọ mkpofu "ihe egwu"